Fivahiniana tany Genève – MICA.
Ny fandraisana an-tanana ny fanampiana eo amin’ny raharaham-barotra, izay tarihan’ny OMC, dia mamporisika ireo firenena an-dalam-pandrosoana sy ireo mpanohana hanaiky ny anjara toeran’ny varotra eo amin’ny fampandrosoana. Izany dia mikendry … Read More
Comment on Fivahiniana tany Genève – MICA.
Salon de la RSE, andiany faha-IV.
Notontosaina tetsy amin’ny Gara Soarano ny hetsika « Salon de la Responsabilité Sociétale des entreprises » (RSE) andiany faha-IV, ny 03 sy 04 Jolay farany teo, izay nampitondraina ny lohahevitra … Read More
Comment on Salon de la RSE, andiany faha-IV.
Ny tsara ampahatsiahivina momba ny lavanila
Ny tsara ampahatsiahivina momba ny lavanila mialoha ny fotoam-pamarotana:Vokatra fanondrana voalohany ny lavanila eto Madagasikara ary miteraka asa mivantana maherin’ny 200 000. Mitondra harin-karena faobe mitentina 6.8% ity sehatra ity … Read More
Comment on Ny tsara ampahatsiahivina momba ny lavanila
MICA-ONUDI Signature projet TSARA.
Ho famaranana ny tetik’asa TSARA novolavolain’ny ONUDI ary novatsian’ny Masoivoho Norvezianina dia notontosaina tetsy amin’ny biraon’ny MICA Anosy ny fanaovan-tsonia ny taratasy fanendrena ho fitohizan’ny asa rehetra. Araka izany dia … Read More
Comment on MICA-ONUDI Signature projet TSARA.
Fitsidihana ny Chocolaterie Robert.
Mitohy hatrany ny fitsidihana ireo indostria Malagasy ataon’ny MICA . Nitsidika ny orinasa Chocolaterie Robert etsy Andrefan’Ambohijanahary, ny 02 Jolay lasa teo ny Minisitry ny Indostria, ny Varotra sy ny … Read More
Comment on Fitsidihana ny Chocolaterie Robert.
Andro natokana ho an’ny fifaninanana ara-barotra.
Andro natokana ho an’ny fifaninanana ara-barotra, andiany faha roa :« Ny fahalalahana sy ny fahamarinan’ny fifaninanana : tombon-tsoa ho an’ny mpandraharaha sy ny mpanjifa ». Izany no lohahevitra novelabelarina nandritra ity fankalazana … Read More
Comment on Andro natokana ho an’ny fifaninanana ara-barotra.